अमेरिकाले राष्ट्रपति पुटिन परिवार माथि हमला गर्यो, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
अमेरिकाले राष्ट्रपति पुटिन परिवार माथि हमला गर्यो, के छ अवस्था ?
वासिङ्टन। अमेरिकाले राष्ट्रपति पुटिन परिवार माथि नै हमला गरेपछि विश्वभर उथलपुथल मचिएको छ। यसपालिको प्रतिबन्ध हमलामा अमेरिकाले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी दुई छोरीलाई पनि समेटेको छ।
पुटिनकी छोरीहरू क्याटरिना र मारियाले बाबुको सम्पत्ति लुकाएको भन्दै उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। झन्डै डेढ महिनाअघि युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रूसविरूद्ध थप आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको छ।
यसपालिको प्रतिबन्धमा अमेरिकाले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी दुई र अरु फेमली मेम्बरलाई पनि समेटेको छ। पुटिनकी छोरीहरू क्याटरिना र मारियाले बाबुको सम्पत्ति लुकाएको भन्दै उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
इमरान खान विगत २३ वर्षमा रुस भ्रमण गर्ने पहिलो पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री हुन्। यसअघि नवाज सरिफले सन् १९९९ मा रुसको भ्रमण गरेका थिए ।मार्चमा नै युक्रेनमा रुसको आक्रमण रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव पेश हुँदा पाकिस्तान मतदानमा अनुपस्थित थियो।
युक्रेनको मुद्दामा पाकिस्तानको आधिकारिक अडान दुवै देशले आपसी विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ।